Meaning of nezimvukuzane emzimbeni womuntu ... Ingabe lokhu kubonakaliswa isethi esingalawuleki lesikhumba, noma ukubukeka kwabo kungokwemvelo?
Kusukela ezikhathini zasendulo, birthmarks isibaluli izimpawu ezihlukahlukene. Bona, kanye, futhi birthmarks, eRussia uye njalo unamathisele ukubaluleka okukhulu. Basuke exhumene ne izimfihlakalo ukudalelwa, yazisa mayelana nemvelo kanye izici eziphathelene nempilo yomuntu, ke ukuyichaza esizayo.
Ikhono ukuchaza ukubaluleka amavukuzi emzimbeni - ke kuyisipho esivela ngenhla, kanti futhi ngokusho zo basendulo babengazi, lokhu ikhono kuphela izintandokazi zakho. Esikhathini esidala ukuchitha imikhuba yabo, phakathi kwesikhathi lapho umbala, indawo kanye nosayizi nezimvukuzane, umnikazi lembula value abo, wabikezela isiphetho ndoda, ngisho ukwenza uphethwe.
Kusukela umbono nezimvukuzane imithi esemthethweni emzimbeni nencazelo yawo - akusiyo into engaqondakali kakhulu futhi ezingaqondakali. Ngu definition, zingabantu odokotela noma ukuphazamiseka kwempilo azalwa naso noma isimila ingozi kwesikhumba.
Nakuba omunye kunemibono yanamuhla ithi ukubaluleka amavukuzi emzimbeni incike indawo yabo.
Izazi Modern bavame ukuba bakholelwe ukuthi nevi kuvame kwakheka noma amandla futhi amaphuzu bioactive noma esishintshashintshayo reflex. Uma sikubeka kalula, nezimvukuzane kukhona uhlobo "antenna", elawula ulwazi namandla exchange phakathi nomzimba womuntu futhi imvelo, kanjalo sinezele inqubo ukuvumelana. Kubonakala kanjalo, kukhona inkolelo yokuthi injabulo isici ithunzi elehlayo nesibalo amavukuzi.
Kuvele Eqinisweni ezithakazelisayo wukuthi eminyaka ambalwa adlule, okungukuthi ekhulwini xv, birthmarks, futhi lesikhumba ngempela okwandisiwe isikhumba, njengezimpawu of amabutho ezimbi. Abantu abanjalo bavame ubalwe njengenye abathakathi noma bayobulala abantu warlocks, baqalekisiweyo futhi washiswa esigxotsheni.
Kodwa eminyakeni engu-300 kamuva, isimo sesishintshile, futhi birthmarks kukhona imfanelo imfashini kakhulu. Abaningi izintokazi uqale ukuhlobisa ubuso decollete nayo, yizimpukane yokufakelwa. Manje, kubonakala kunzima ukukholelwa ukuthi e Ngalezo zinsuku kwakungekho ngisho uhlobo uthando Ukwanelisa inkanuko futhi ulimi ukubaluleka amavukuzi emzimbeni sahunyushelwa njengophawu lokuthi uzwela, unomusa, ukuthobeka, noma ngisho ngenzondo.
Kwamthatha isikhathi eside impela, futhi namuhla, iplanethi yethu Sekuyisikhathi eside ubuswa Imininingwane ubuchwepheshe kanye nentuthuko kwezobuchwepheshe, abantu namanje uqhubeka ukubona e amavukuzi nakuwo birthmarks izilongotshane uphawu ongaqondakali, okuyinto predetermines okushiwo ngamunye wethu.
Kulesi sihloko, Ngithanda ukugcizelela kabanzi indlela ukubaluleka amavukuzi emzimbeni kungenziwa libhekene aphethe.
Nezimvukuzane ngemuva. Umnikazi, njengoba umthetho, ungumuntu nabanomusa futhi evulekile, benawo umphefumulo baphane futhi inhliziyo kakhulu. Cishe ehlanganisa ngokungesabi nangokuba nesibindi, romance kanye amahloni. Ngokuvamile yena uthanda ukunikeza iseluleko, ngaleyo ndlela kudvwebela ikhono layo ezehlukile kanye nezobunhloli.
Abanikazi of nezimvukuzane ngesisu sakhe - i ubuntu okungavamile, ngokuvamile othambekele ubugovu Narcissism. Ziyakwazi kulula ukuba nginqobe ubunzima wokuphila, ukuze nje omjwayele nokuthi engawayekanga ingxenye nabangani efanayo kanye nezinkampani.
Nezimvukuzane entanyeni ekhanda imakwe ngabantu abanamakhono futhi zokudala avame athambekele ekusebenziseni nokuzibhaxabula nefilosofi. Ziyakwazi ngokomzwelo kakhulu, kodwa bayakwazi ukubonisa izimfanelo zabo best sezikhathi ezinzima kakhulu ekuphileni
Nezimvukuzane endaweni esifubeni aveza ubunjalo ephakeme, Ukwanelisa inkanuko wakhe ongaphezu kovamile nekhono lokukwazi ukujabulela uthando akupheli, ukuzinikezela kweqiniso. Abanikazi of nezimvukuzane phezu webele kwesokunxele kuyinto abazikhandlayo kakhulu kunquma, bavame ukuthwala ekuphileni komkhaya. Uma uwayehlalise amavukuzi owesifazane, ngokuvamile uthola unina kakhulu, ngeke abazidelayo babambelele izingane zabo.
Ingabe ikhona impilo emva kokufa: isimanga abangakholelwa ukuthi uNkulunkulu ukhona
Ngingakwazi ukusebenzisa uju ngesikhathi? zokupheka ngempumelelo
Indlela iqhwa pepper ebusika? Indlela ukumisa imifino